Hogaamiye Cali Khaliif Galaydh Oo Hargeysa Ku Sugan, Lana Filaayo Inuu Dawladda Cusub Ee Somaliland Kamid Noqdo.
Saturday December 02, 2017 - 09:05:37 in Wararka by Halgan News
Hargeysa(Halgan)Hogaamiyihi hore ee kooxda Khaatumo Cali Khaliif Galaydh ayaa waqtigan Hargeysa ku sugan, iyada oo la filaayo in uu kamid noqdo dawlada Cusub ee uu soo dhisi doono madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhowaan.
Siyaasi Cali Khaliif Galaydh ayaa dhowaan soo gaadhey magaalada Hargeysa, iyada oo ay wehelinayaan xubno kamid ah kooxdiisa Khaatumo.
Dadka ayaa aad u hadal hayey joogitaanka Cali Khaliif Galaydh, iyada oo qaar badan oo kamid ah shacabku ay saadaalinayaan in uu kamid noqon doono xukumadda cusub ee Somaliland yeelan doonto.
Qaar kale oo kamid ah shacabka ayaa sheegaaya in uu xukumadda ku darsan doono xubno kamid ah saraakiisha sar sare ee maamulka Khaatumo, kuwaas oo kamid noqon doona xukumadda madaxweyne Muuse Biixi .
Xubnaha aadka loo hadal hayo waxa iyaguna kamid ah Kayse Cabdi Yuusuf oo ahaa ninkii u qaabilsanaa kooxdaasi arrimaha Gudaha, sidoo kalena hore usoo noqday Wasiir u dawlaha Goboladda Barri ee Somaliland xiligii xukumadda Siilaanyo bilawga ahayd.
Ilaa hadda ma cadda sababta uu cali khaliif galaydh u joogo magaalada Hargeysa, iyada oo ay dhowaan heshiis kala saxeexdeen kooxda Khaatumo iyo jamhuuriyadda Somaliland xukumadda ka dhisani.